प्ले ब्वाइ मात्र होइन प्ले गर्ल पनि हुन्छन - ट्विटर - साप्ताहिक
बीबीए : बिहान–बेलुका अल्छी, बीबीएस : बिहान–बेलुका सुत्ने, बीएड : बिहानैको इच्छा डेटिङ, एजी : आयो गयो कलेजमा गफ लायो, बिएस्सी : बुवाका सपना चकनाचुर, बीई : बदमासदेखि इमान्दारी, एमए : मानसिक अल्छी, एमबीएस : मादक बेच्ने साधन, एमडीएस : माइला दाइको ससुराली, एमबीबीएस : मान्छे बिगार्ने बनाउने स्थान ।
मानिस बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गरेर त्यति थाक्दैन, जति चिन्ता र क्रोधले एक क्षणमै थाक्छ ।
आमा–बाबाले आफ्ना सन्तानको भाग्य बदल्न नसक्लान् तर राम्रो मार्गदर्शन अवश्य दिन सक्छन् ।
रूखमा बसेको चरालाई हाँगा भाँचिएला कि भन्ने डर हुँदैन, किनभने ऊ हाँगामा भन्दा आफ्नो पखेटामा बढी विश्वास गर्छ ।
कोही ज्ञानीले यो बताउन सक्नुहुन्छ ? – हिरोइनले पठाएको चिठी हिरोले पढ्दा पढ्ने मान्छेको आवाजको ठाउँमा लेखेर पठाउने मान्छेको आवाज किन आउँछ ?
प्ले ब्वाइ मात्र होइन प्ले गर्ल पनि हुन्छन्, मन केटीको मात्र होइन केटाको नि रुन्छ ।
संसार यति ठूलो छ कि यदि कसैले तपाईंको साथ छोड्यो भन्दैमा एक्लै भएँ भनेर चिन्ता लिनु पर्दैन, किनभने जानेहरू गए पनि आउनेहरूको कमी हुँदैन ।
सञ्चारमन्त्रीज्यू, के–के त बन्द गर्नुभो, यो टिभीमा आउने झुर वक्ताहरूको टक शो तु बन्द गराइसियोस् । एउटा कुरा, एक मिनेट, राम्रो प्रश्न, मलाई पूरा गर्न दिनुस् भन्दै घण्टौं हाम्रो गिदी खाइरा’छन् । जुन टिभी खोले पनि त्यसका बाजे त्यही टक शो ।
जबसम्म तिम्ले जित्दैनौ नि तबसम्म तिम्रो जीवनको कथा कसैले सुन्दैन । त्यसैले हार भन्ने कुरा आफ्नो शब्दकोशबाट हटाइदेऊ ।
पत्याउनुस्–नपत्याउनुस्, तर ट्विटरमा लभ परेर बिहे हुन्छ भन्नु र पोलमा पोस्टर टाँसेर समृद्धि आउँछ भन्नु एउटै हो ।
रोगको आधा उपचार आफ्नै मस्तिष्कमा हुन्छ, सकारात्मक सोच्नुस् रोगसँग लड्ने क्षमता आफैं वृद्धि हुन्छ ।
जागिर र गर्लफ्रेन्ड कहिल्यै अरूलाई खोज्न नलगाउनु होस् । राम्रो भेटे आफैंले राख्छन्, नराम्रो भए मात्रै तपाईंलाई टाँसो लगाउँछन् ।
प्रयास नगरेकै जाती जुन चिज पाएर नि खुसी मिल्न सक्दैन भने ।
वर्तमानमा बाँच्नुस् मित्र, भविष्यको पछाडि नभाग्नुस्, भोलि कसले देखेको छ ?
आफैंसँग डराउँछु म, आफूभित्रै हराउँछु म, आफैंसँग प्रश्न गर्दै कहिलेकाहीं कराउँछु म ।
ज्यान नै दिनु पर्दैन कान्छा, कहिलेकाहीं ध्यान दिए पुग्छ ।
कान्छी, यो जाडोमा तिम्रो फेसभन्दा त नर्थ फेसको ज्याकेट साह्रै प्यारो लाग्छ ।
जीवन सार्थक बनाउन पानीले मात्र होइन, पसिनाले पनि नुहाउनुपर्छ ।
म यो कुरा ठोकुवा गरेर भन्न सक्छु कि तिम्लाई लाग्ने ९९ दशमलव ९ प्रतिशत बाडुल्कीको कारण म नै हुँ ।
रोएर पीडा कम हुन्थ्यो भने म दुई–चार दिनसम्म रोइ नै रहन्थें ।
बैंक ब्यालेन्स गर्ने उमेरमा बल्ल खुत्रुकेमा पैसा जम्मा गर्न सिकाइन्छ, अनि कहाँबाट बन्छ छोरो उद्यमी ? २ रुपैयाँको शिक्षा दिएर २ करोडको आशा राख्नु भएन नि हजुर ।
धोका यत्तिकै पाइँदैन हजुर, कसैको भलो गर्नुपर्छ अनि उसको राम्रो सोच्नुपर्छ धोका त आफैं पाइन्छ ।
खुकुरीको दाप हजुर खुर्पाको बिंड, माया छ भने सोल्टा आजै भागौं हिंड ।
एउटा राम्रो साथी बन्न नसक्ने मानिस जीवनसाथी कसरी बन्न सक्छ ?
सुन्दरतासँग धोका नखाऊ, तरबार चाहे जतिसुकै सुन्दर किन नहोस्, माग्न त त्यसले खुन नै माग्छ ।
२०४६ सालमा आएको होइन प्रजातन्त्र ? आज लगभग तीन दशक भएछ, तैपनि अझै सुध्रिएका छैनौं हामी । पटक–पटक, लगातार निकम्माहरूलाई चुनावमा जिताएर सत्तामा पठाउँछौं अनि फुर्सदमा पछुताएर फत्फताउँछौं ।